एकल वा मुर्गा एक ला meunière | ThermoRecines
एकल वा मुर्गा एक ला meunière
माछा30 मिनेट2 व्यक्ति275२ क्यालोरी
मैले सँधै एक्लोको बारेमा सुनेकी थिएँ meunière लाई र तिनीहरूले यसलाई रेष्टुरेन्टहरूमा राखे, त्यसैले मैले सँधै सोचें कि यो वास्तवमै भन्दा अझ गाह्रो वा जटिल विधि हुनेछ। तर जब मैले के पत्ता लगाए छिटो र सजिलो त्यो हो, यो घरमा पनी एक माछा पकाउने बन्यो।
यो एकमात्रसँग बनेको छ, तर कहिलेकाँही यसको मूल्य धेरै सस्तो हुँदैन, त्यसैले तपाईं यसलाई कुनै पनि समस्या बिना मुर्गाको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। यस नुस्खाको चाल माछा र निम्बूको चटनीमा छ जसको साथ माछा पनि छ ... यो वास्तवमै स्वादिष्ट छ। तपाईं कति सरल देख्नुहुनेछ।
1 एकल वा मुर्गा एक ला meunière
2 TM21 बराबर
एक एक्जिष्ट एक्लो ला मेनुइरे, एक स्वादिलो ​​लिम्बू, बटर र अजमोदको सॉसको साथ। जब भेरोमा मा पकाइन्छ, एक धेरै रसदार माछा बाँकी छ।
भान्छा कोठा: फ्रान्सिसा
रेसिपी प्रकार: माछा
खाना पकाउने समय: 30M
कुल समय: 30M
२ तल वा रासन मुर्गे
G० ग्राम बटर
१/२ सानो लिम्बू को रस वा १/1 यदि यो ठूलो छ भने।
काटिएको अजमोद को एक राम्रो मुट्ठी
कुमारी अलिभको तेल
२ मध्यम आलु वा १ ठूलो
हामीले गिलासमा १ लिटर पानी हालेर नुन थपे। हामी टोकरी र कार्यक्रम राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, चम्चा गति।
जब हामी माछालाई सिजन गर्दछौं र भेरोमा ट्रेमा राख्छौं। हामी भद्राक्षको तेलको थोप्लो जोड्छौं। हामीले बुक गर्‍यौं।
जब समय सकियो, हामी जारमा आलुहरू थप्दछौं जसले गर्दा तिनीहरू टोकरी र कार्यक्रममा झर्छन् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
त्यसपछि हामी यसको स्थान र प्रोग्राममा भेरोमा कन्टेनर राख्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामी ट्रे हटाउँछौं र यसलाई कभर छोड्छौं जब हामी सास बनाउँदैछौं ताकि माछा न्यानो रहोस्। हामी आलुहरू हटाउँछौं र तिनीहरूलाई तातो राख्छौं। हामी सिसाबाट पानी खाली गर्दछौं।
सिसा नधोईकन, बटर र प्रोग्राम थप्नुहोस् १ मिनेट, भेरोमा तापमान, चम्चा गति।
कागती र अजमोद र प्रोग्राम थप्नुहोस् १ मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १।
हामी प्लेटहरूमा माछाको सेवा गर्छौं र माथि सॉस खन्याउँछौं। हामी आलु संग संग।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, अण्डो असहिष्णु, १/२ घण्टा भन्दा कम, माछा, वरोमा रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » एकल वा मुर्गा एक ला meunière
शुभ प्रभात, तपाईले सामग्रीमा आलु समावेश गर्नुहुन्न, अभिवादन ...
JOTAKU लाई जवाफ दिनुहोस्
यो सत्य हो! मैले बिर्सें, यो पहिले नै सहि छ। तिनीहरू २ मध्यम आलु वा १ ठूलो छन्। धन्यबाद;)
हामीले राख्नु पर्ने पोटाटोको मात्रा के हो? एक शुभकामना।
MERCEDES लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, मैले यसलाई समावेश गर्न बिर्सें: २ मध्यम वा १ ठूलो 🙂
थर्मोमिक्स रेसिपीहरू भन्यो
हामी सामग्रीमा आलुको मात्रा समावेश गर्न बिर्स्यौं, माफ गर्नुहोस्! यो पहिले नै विधिमा सुधार गरिएको छ, तर मात्र केसमा यो २ मध्यम आलु वा १ ठूलो हुनेछ। धन्यवाद!
थर्मोमिक्स रेसिपीहरूमा जवाफ दिनुहोस्
जब हामी आलु5मिनेट पकाउनुहुन्छ। के हामीले भेरोमा ट्रे राख्दा आलुले टोकरी हटाउनु पर्छ?
र के माछा पूरै राख्नु पर्छ वा आधामा खुला गर्नु?
Gespy लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते Gespy। आलुको कुल समय २० मिनेट हो, त्यसैले तपाईले देख्नुहुनेछ कि उनीहरूले पहिले minutes मिनेट र पछि १ 20 माछा पकाउँदछन्। त्यसकारण, जब हामी भेरोमा राख्छौं टोकरी हटाउन आवश्यक छैन। माछा टाउकोबिना, पूर्ण हुन्छ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
नमस्कार, यदि मसँग पहिले नै फिलेट्समा माछा छन् भने, म यी विधिहरू पनि बनाउन सक्छु, धन्यवाद
नमस्ते मोनिका, कुनै समस्या बिना, यो तपाईंमा उत्कृष्ट देखिनेछ। होनि, तिनीहरूलाई केवल १० मिनेटको लागि भेरोमामा पकाउनुहोस् र यदि तिनीहरू धेरै मोटो छन् भने, १२ मिनेट पर्याप्त हुन्छ। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ! अंगालो
नमस्कार, यो १० मिनेटको साथ उत्तम थियो, धेरै धेरै धन्यबाद, यो एक महान डिश हो!
कति राम्रो मोनिका! म साच्चै खुसी छु your तपाईको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
यो महान हो !!!! मैले यो धेरै पटक गरिसकें किनभने बच्चाहरूले यसलाई माया गर्छन् !! र हामीलाई अधिक, hehe। धेरै धेरै आइरन धन्यबाद!
सुसानालाई जवाफ दिनुहोस्
ओलीआई सुसाना, तपाईको टिप्पणीको लागि धेरै धन्यबाद, यसले मलाई धेरै उत्साहित बनायो। 🙂
व्यक्तिगत प्याज, Emmental र ह्याम टार्टलेट्स
मूल रेसिपी: पिघलाइएको चकलेट